प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन्स डे ! विश्वभर प्रेम साटासाट गरेर यो दिवस मनाउने प्रचलन छ । प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीको लागि माया साटेर मनाउने दिनको रुपमा भ्यालेन्टाइन्स डेलाई लिइन्छ । नेपाली मनोरञ्जन...
पलले भने- केमेस्ट्री राम्रो बनाउन सहकर्मीसँग नजिक हुँदा म कसरी प्लेब्वाइ ?
१३ माघ, काठमाडौं । म्युजिक भिडियोका व्यस्त मोडल तथा अभिनेता पल शाहलाई विभिन्न उपनाम दिने गरेको पाइन्छ । म्युजिक भिडियोका व्यस्त यी अभिनेताको विभिन्न महिला मोडलसँग नाम पनि जोडिने गरेको छ ।...